Olan’ny jiro Velon-taraina amin’ny Jirama indray ny vahoaka | Ny Valosoa Vaovao
Olan’ny jiro Velon-taraina amin’ny Jirama indray ny vahoaka
Resabe eto Antsirabe indray ankehitriny ny fepetra raisin’ny Jirama. Nandray fepetra indray mantsy ny tompon’andraikitra amin’ny fanapahana ireo fitarihana jiro miainga avy amin’ny tranon’olona iray manana ireny « Compteur » ireny ka miampita amin’ny trano hafa tsy mbola manana ilay fitaovana. Raha ny fanambarana avy amin’ireo tompon’andraikitra dia voalaza fa hisorohana ny loza mety hitranga sy hisakanana ny mety hisian’ny halatra jiro no nandraisana izany fepetra izany, izay nambara fa tafiditra ao anatin’ny fanitsiana ny fitantanana ity Orinasam-panjakana ity. Tsy ankasitrahan’ireo mponina anefa izany satria tena efa nisy ny fanapahana ireo izay hitan’ny Jirama ary mbola mitohy izany amin’izao fotoana ka nitaraina tany amin’ny Ben’ny tanàna ireo vahoaka marobe. Nambaran’ireo mponina efa voakasika fa ny Jirama no tsy mahavita ny andraikiny amin’ny fitsinjarana ireo « Compteur », satria saika efa manana fangatahana avokoa ireo tokantrano ireo saingy tsy misy ao amin’ny Jirama Antsirabe kanefa ny olona mila jiro ka aleon’izy ireo mifanaraka amin’ny manodidina izay efa mba manana « compteur » ka mampiasa ilay antsoina hoe : « sous-compteur » ka samy mandoa izay lanininy ny mampiasa izany.
Tsy eken’ny Jirama anefa izany fa lazain’izy ireo fa tokony hiandry ny fitsinjarana ny fahatongavan’ireo fitaovana ny olona fa tsy mahazo mitaritarika jiro intsony ka efa nisy ny « opération » nanesorana ireo izay tratran’izy ireo mitarika jiro. Nambaran’ny ben’ny tanàna Paul Razanakolona fa tsy avy amin’ny mponina no mahatonga azy ireo hitarika jiro io fa avy amin’ny Jirama ka niangavy ny Jirama mba hampitsahatra izao hetsika izao ny tenany mba hitandroana ny mety hisian’ny korontana. Namafisin’ny ben’ny tanàna mantsy fa karazana fanakorontanana ny fiaraha-monina no ataon’ny Jirama satria tsy mbola misy ny fitaovana ao aminy ary ny filàna anefa efa be dia be ka ahiana tsy aharaka izany akory ny tolotra omenin’ity orinasa ity kanefa dia ny fanapahana jiro no mahamaika azy. Etsy andaniny koa dia tsy mangalatra jiro ireo olona ireo fa ny « compteur » efa misy amin’ireo olona mifanaraka aminy no ampiasaina sy handoavan’izy ireo ny faktiora. Isan’ny olana nambaran’ny ben’ny tanàna ihany koa ny mety hanararaotan’ny olona ny tsy fandriampahalemana satria saika ireo tanàna vaovao vao miorina avokoa ireto misarika jiro ireto ka hiteraka olana izany. Nanamafy ny Ben’ny tanàna fa efa nisy ny fifampiresahany tamin’ny tompon’andraikitry ny Jirama manoloana ity resaka ity ka ho hita eo ny fepetra ho raisin’izy ireo momba izany. Etsy andaniny dia miely ny resaka fa isan’ny hararaotan’ny tompon’andraikitra sasany ao amin’ny Jirama hanaovana kolikoly ity resaka « compteur » ity manerana an’i Madagasikara ka izany no mampanahy ny mponina satria tsy milahatra araka ny fangatahana ny famoahana izany fa arakarak’izay manam-bola sy mahatolotolotra ihany. Asa moa raha mba fantatry ny tompon’andraikitra izany na tsia.